ZTE Blade GF3, okuyinto libuyekeza isithakazelo abathengi ezingaba iyinhlangano zokuxhumana ithuluzi elihle. Namuhla sikhuluma izici zedivayisi, ezinhlangothini zalo emihle nemibi. ZTE Blade GF3, okuyinto Ukubuyekezwa okwethulwa kulesi sihloko, sizohlola ngezindlela ezihlukahlukene. Sicabangela futhi ukubukeka kudivayisi, nokwenza kwayo. Kodwa ake sibuyekeze ZTE Blade GF3 kuyinto nokwenza kwayo lobuchwepheshe. Mayelana nabo - kafushane ngezansi.
ZTE Blade GF3. izici
isihloko Ukubuyekeza lanamuhla diagonal 4.5 amayintshi. Idivayisi ine kwikhamera main isinqumo megapixels eziyisishiyagalombili. Processor is clocked at 1200 MHz. Ukusebenza sipho cores ezine. Inani imemori yangaphakathi kanye eside ngokulandelana kuyinto eziyisishiyagalombili nokukodwa igigabhaythi. Njengoba uhlelo ZTE Blade GF3 ezisebenza, okuyinto Izibuyekezo zingatholakala ekupheleni kwalesi sihloko, umndeni iyasebenza 5.0 "Android". I etholakalayo ezimbili nezikhala Micro SIM ifomethi yekhadi. umthamo webhethri ibalwa 1850 milliamps ngehora, futhi unganikela kufika ku-emahoreni ayisishiyagalolunye ingxoxo okuqhubekayo. isisindo salo elilingana 155 amagremu.
Sale ZTE Blade GF3, imiyalelo okuyiwona likhona ukulethwa, i iphakethe abavamile, ejwayelekile ngakho ngenxa namanye amadivayisi wenkampani Chinese. Singasho ukuthi kakusikho ukusoka okusobala enyameni kubukeka ngempela nice. Nokho, ngaphakathi ungathola ukucushwa ubuncane for smartphone, esakhiwa ikhebula ugesi kanye microUSB format, kanye imanyuwali yomsebenzisi futhi lewaranti. Okuningi lapha asiyitholi lutho. Dream ngesivuno akufanele kube. Ngiphakathi ifilimu nanto enye akuyona lapha. Ngisho ku-headphones kanye Chinese ukulondolozwa. Nakuba angalindela ini kusuka kulesi sabelomali-njengoba sisuke sicabanga namuhla model?
ZTE Blade GF3, intengo okuyinto ecishe ibe yizinkulungwane eziyisithupha ruble, hhayi kakhulu kuhlukile nozakwabo. Kungokufanayo nangamathonya onobuhle efanayo, ngokunokwenzeka kakhulu, ukukhishwa yakamuva. Ngokwesibonelo, ungathola okufanayo touch-sensitive izinkinobho. Yiqiniso, umklamo ukopishiwe, hhayi kuphela ngokumelene nawo. Nokho, kubonakala kancane ongaziwa ngisho akunangqondo, ukungabi a usebe bluish emhlabeni ikhamera. Akukho enengqondo yokuthi kungani amaShayina ngokuzumayo unqabile uthathe leso sinyathelo ukwakha idivayisi entsha.
ZTE Blade GF3, intengo okuyinto eziphansi ngokwanele ukufinyelela ukushuba 9.4 kwangu. Ngezansi esibukweni ungathola ezintathu izinkinobho touch-sensitive. Omunye wabo, okuyinto has simise isiyingi, ngokuthi "ekhaya." Ohlangothini ke ngamunye kukhona amaphuzu amabili. Ababona, ngokulandelana, amelela "Imenyu" futhi "Emuva". Navigation uhlelo inikezwa ngenxa nje lezi Izilawuli elula. Ngenhla esibukweni ungathola esitolo esidayisa yesifakwandlebeni, kanye uhlelo yekhamera yangaphambili.
Ebusweni ezingemuva namakhambi awusizo
Nge-ZTE Blade GF3 ohlangothini misa, ekuhlaziyeni okuyinto kuboniswe kulesi sihloko, lens eyinhloko itholakala ophumile ekamelweni. Zibonisa umuntu-kwesigaba LED. Futhi aqhwakele eduze kuvulwa umsindo Dynamics. Kusukela kulolu hlangothi kungabonwa libhalwe brand logo futhi inkampani Chinese. Uma ubuka eduze, singakwazi uqaphela ukuthi ikhava kuyinto matte. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi lokhu ikhambi ungeze ukuvikeleka ngokuya ukusebenza, njengoba idivayisi ngeke lushelele ezandleni zakho, ngisho zeminwe ngeke iqoqwe. Okungenani, esebenzayo ngakho.
Ukusonta ZTE Blade GF3, ukubuyekeza esikhuluma ngalo manje Ngokuqhubeka, ngezandla zakhe, iyangena imakhrofoni elise ezansi. Ebusweni obuhlukile isixhumi exhumana headphones yezintambo. Kwesokudla uqaphela inkinobho kabili, esiklanyelwe ulungise umsindo bese ushintshe mode umsindo, lapho adluliselwe efonini. Ngokushesha kukhona isihenqo inkinobho yokuvala bese uvula iyunithi off. Isigwedlo isivalo angasebenzisa abafanele ukuvuleka encane. Ngakwesokunxele kuyinto isixhumi wayeqamba nokuvumelanisa intambo kukhompyutha / laptop yakho.
Bonisa: esengumphostoli wokugcina ubuchwepheshe ekhulwini ukulondoloza idumela Chinese isimo umsebenzi
ZTE Blade GF3, izici ukuthi kufanele kubhekwe ngaphambi kokuthenga esibukweni kodwa ayikhanyi kakhulu. Ovundlile kunjalo, njengoba sishilo, 4.5 amayintshi. Isithombe uboniswa esikrinini njengoba isinqumo FWVGA at 854 ngu-480 amayintshi. Khombisa-matrix kwakheka kwi TFT ubuchwepheshe. Lokhu kusho ukuthi isithombe kuyoba nzima ukubona nokufunda umbhalo jikelele kunzima kakhulu elangeni. Kwesinye isikhathi lokhu inkinga isixazululekile ngu inqolobane enkulu ukukhanya, kodwa isikhonzi Ukubuyekeza namuhla lethu abakwazi ukuqhosha.
Ukubuyela isihloko ukubhekakade we matrix, okuyinto ifakwe smart phone ZTE Blade GF3, kufanele kuphawulwe ukuthi manje TFT-matrix uhlobo ingahle yisikhathi, futhi abakhiqizi abaningi ozama ngisho nabasebenzi bakhe isimo ukusungula IPS. Uma sithatha iyunithi kuya ruble ayizigidi ezibizayo (makube idivayisi lenkampani efanayo, kuphela oyisibonelo igama engavamile NH), futhi lapho ungathola nje matrix isibonisi enjalo. Akukacaci ukuthi kungani Chinese isithathe isinqumo ngomsebenzi hambisa ithemba futhi enjalo silly njengoba kubonakala, emnothweni. Ngokungafanele, kungashiwo. Okuwukuphela agumenti okunengqondo ephakama ingqondo - ke Kutama nokuqalisa isimiso ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. Noma kunjalo, sinesizathu idivayisi ifakwe hhayi ibhethri capacious kakhulu, futhi esikrinini kule ndawo ukuthi okuningi kuncike. By the way, idivayisi yethu ukufaka ngokuthinta yakhelwe kuthintwa kuphela ezimbili kanyekanye.
ZTE Blade GF3 smartphone isekela amafomethi ezimbili yekhadi le-SIM. Basuke efakwe ngokususa ibhethri ngaphambi kwesikhathi. Lokho, ngenkathi ifoni ukushintsha amakhadi SIM akusebenzi. Wena awazi ngisho, thokozani yokuthi ubuhlobo benu lokubanjwa ezinzile, noma ngendlela okufanele kube ngayo. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, umshini usebenza kahle kwesizukulwane sesithathu kwinethiwekhi yefoni, bese kubhekwa kuyinsakavukela noma kuwusizo kakade, umsebenzisi ngamunye kumele ngumnikazi, uqhathanisa ne smartphone odlule.
ZTE Blade GF3 Black ngesikhathi Ukuqalisa kokuqala abashukumisela umsebenzisi ukhethe yiziphi SIM khadi ngeke kamuva isetshenziswe njengoba eyinhloko. Okungukuthi, yena ngokushesha eyabelwe mode nokusebenza e kwesizukulwane sesithathu kuhleloxhumano yeselula. Guqula eziza kuqala kungaba kwesikhashana kuzilungiselelo zedivayisi. Kodwa yini okumelwe niyenze, uma kukhona kungenziwa ngokushesha? Asikwazi ngokushesha awucacisanga ikhadi izosetshenziswa ukwenza izingcingo ngezwi bese packet data. Uma kukhona isifiso, omunye slot ingacishwa.
abafundi Isexwayiso ukuthi, ZTE Blade GF3 Black ikuvumela ukwabela Imodi 3G SIM khadi eyodwa kuphela. izilungiselelo Eceleni kuchazwe ezifana no-opharetha wenethiwekhi kanye yokufinyelela kwemukela ukudluliswa traffic Inthanethi. Nakuba abasebenzisi musa akhononde izinga yokuxhumana, kodwa simdumise kuphela, izinga kuyinto kakhulu. Surface wehlele, kodwa egumbini, izitolo, ngezitimela ezigcwele, komhlaba zokupaka kanye nezinye izakhiwo efanayo isignali uzonyamalala.
ZTE Blade GF3, icala okuyiwona angathengwa at salon eliseduze yeselula ngaphezu kwalokho ifakwe ukusondela izinzwa izibani. A ibhonasi nice, nakuba ayengazi njengoba ezibizayo. Kukhona ngenhlanhla omunye accelerometer. Izinzwa lula ukuphathwa idivayisi: lapho ukukhanya umsebenzi ohambelana ngeke kushintshwe ngokuzenzakalelayo kuye ngokuthi ezingeni sokukhanyisa emhlabeni. Kodwa inzwaduze ngeke lokuxhaphaza kwasemuva isikrini uma ingxoxo. Ngakho, njengoba sisondela indlebe kuyothiwa ucishiwe. Lapho ibanga - kuhlanganisiwe. I iziphuphutheki ukuseshwa idivayisi isikhathi eside kakhulu. isiqalo kokuqala kungase kuthathe nje imizuzu amabili noma ngisho ihora. Ezinye izindaba zika-zokuxhumana phezu kokukhononda, Wi-Fi kanye Bluetooth, futhi 4G LTE zezindleko ezinjalo akufanele kulindeleke.
Isistimu kanye ne-Software
Ucingo ZTE Blade A GF3 iza izitolo amaselula nomkhaya ezifakwe "Android" 5.0. Buka igama idivayisi kungaba izilungiselelo imenyu elihambisana. Ihlola kungembula ukuthi njengoba ukufakwa ifayela lokubuyekeza yesistimu yokusebenza wadedelwa. Kukhona ezinye nemisebenzi uhlelo ahlelewe, futhi ezinye izimbungulu siyachazwa. Ingabe manje mancane amathuba nobuso imiyalezo belingafundeki futhi ukubonisa engalungile lezinhlamvu amadokhumenti wombhalo. Ngemva kokufaka i version ngcono kwe-software izoshintsha ukusuka 5.0 kuya 5.1.
I-ZTE Blade GF3 8 GB ukufinyelela okusheshayo kuzilungiselelo main. Abakwazi isebenze noma ingasebenzi, imali echithwa kwesihenqo phezulu. Isethi kuhlanganisa izici ezinjalo, ezifana Bluetooth, i-Wi-Fi, indawo. Kuleli uhlu kubo Yiqiniso, akugcini lapho. Kodwa okushiwo yingenxa kuyaqondakala. Kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza olufakwe futhi amathuluzi awusizo. Kuyafana Master Hlanza. Uhlu lufaka nokuphathelene ikhibhodi ye-Chinese, ihhovisi mobile, isiphequluli Chinese, izixazululo ejwayelekile kusukela ku-Google, ukuxhumana nomphakathi. Kwamjabulisa khona noma yimuphi-anti-virus. Uhlu ukuqhubeka, kodwa akufanele kube.
Imenyu izilungiselelo nakanjani efana izakhi ezifanayo nezinye Smartphones egijima umndeni yesistimu yokusebenza "Android" 5.0. I kwesokunxele inkinobho ezithambile izilungiselelo ifektri unesibopho uya emuva. inkinobho Kwesokudla ukuvula imenyu. Lezi izilungiselelo zingaguqulwa ngokubona yomsebenzisi esebenzisa isofthiwe eyakhelwe.
ZTE Blade GF3. Izibuyekezo mayelana umshini
Okutshela abasebenzisi abathenge lo mkhiqizo? Empeleni, inkampani Chinese kwesokunxele idivayisi ngokwanele ezinhle, okungenani oluhambisana intengo. Ngenxa mode "Umndeni" kungase kubhekwe njengokwelapha kuhlanganise idivayisi asebekhulile. Ukuba buthaka kuphela kwaba nokuxhumana kancane ne iziphuphutheki. Le foni akuyona ukhetho best, uma kunesidingo, ingxenye navigation. ukusebenza Special akazange kukhanye, kodwa ngaphakathi ingxenye umncintiswano ezinhle kwezinye izidalwa.
Chingiz Mustafayev - umzuzwana impilo